कुनै वयस्क एक पानी पार्क भ्रमण गर्ने मौकाको छैन अप - के किशोरीहरूको र छोराछोरीलाई बारेमा हामी भन्न सक्छौं? संसारमा त्यहाँ यस्तो मनोरञ्जन क्षेत्र को एक महान नम्बर, तर केवल चुनिएको सबै भन्दा राम्रो भनिन्छ सकिएन छन्। पानी पार्क को, सबैभन्दा सुन्दर रोचक र ठूलो के हुन्?
10 संसारको सबै भन्दा राम्रो पानी पार्क को
निस्सन्देह, उहाँले यो योग्य ठ्याक्कै किन निर्धारण गर्न सबै भन्दा राम्रो को शीर्षक, र पनि गाह्रो लगाउन योग्य छ जो पानी पार्क बताउन गाह्रो छ। तिनीहरूले सारा ग्रह मा 2000 को क्रम धेरै छन्, र प्रत्येक यसको लाभ छ। सबै भन्दा ठूलो र पर्यटकहरु बीच लोकप्रिय विचार गर्नुहोस्।
1 महासागर डोम, मियाज़ाकी, जापान
उहाँले जानिजानि यो ग्रह मा सबै भन्दा ठूलो मानिन्छ किनभने "शीर्ष दुनिया को सबै भन्दा राम्रो पानी पार्क" को सूचीमा 1st ठाउँ लिन्छ। यस घरको छानो मुनि 10 000 मानिसहरू एकै समयमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ। चाडहरूमा, नृत्य र शो: यो पानी पार्क सेतो बालुवा, ठूलो छालहरू सुन्दर कृत्रिम समुद्र द्वारा धोए छ जो संग एक समुद्र तट सुविधाहरू, धेरै दुर्लभ ट्रपिकल बिरुवाहरु, जक्यूजी, पानी स्लाइडहरू, स्पा, जैकुजी, सिनेमाहरू र रेस्टुरेन्ट संग पूल स्विमिंग लगाए थिए, रोचक घटनाहरू विभिन्न होस्ट । मुख्य विशेषता - एक पारदर्शी छानो सट्टा छत, यो चिसो वा वर्षा हुँदा घाम तातो दिन मा खुला र बन्द छ।
2. महासागर पार्क, हङकङ, चीन
संसारको »को" सर्वश्रेष्ठ पानी पार्क को सूचीमा दोस्रो - «महासागर पार्क। उहाँले सबैभन्दा संसारमा भ्रमण छ। यो पानी पार्क हरेक वर्ष5लाख भन्दा बढी मानिसहरू आउँछन्। सारा क्षेत्र पारंपरिक2भागहरु, समुद्री जीवन केबल कार, घर गर्न एउटा पारदर्शी टनेल द्वारा एकताबद्ध र ट्रपिकल greenery मा बढ्छ जुन विभाजन गरिएको छ। पानी पर्यटकहरुका लागि सेवाहरूको प्रशस्त, साथै र सामान्य आकर्षण हो।
3. Wet'n 'WildWaterWorld, गोल्ड कोस्ट, अष्ट्रेलिया
यो पानी पार्क राम्रो मनोरञ्जन पूर्वाधार विकास गरिएको छ। पर्यटकहरू तिनीहरूले छुट्टी मा हुन सक्छ सबै पाउनुहुनेछ। इलाका मा4ठूलो पूल र बच्चाहरु र वयस्क लागि आकर्षण को एक किसिम छन्।
4 Noah`s जहाज Waterpark, विस्कन्सिन, संयुक्त राज्य अमेरिका
संसारको सबै भन्दा राम्रो पानी पार्क, जो को फोटो, यस लेखमा प्रस्तुत छ सबै ग्रह भन्दा छरिएका छन्। त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा छन्। यो Noah`s जहाज Waterpark ध्यान लायक छ - यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा ठूलो पानी पार्क छ, निर्माण र आकर्षण बारम्बार संसार र उद्धार सेवा मा सबै भन्दा राम्रो भनिन्छ जो सुरक्षाको लागि उच्चतम सम्भव पुरस्कार सम्मानित गरिएको थियो। 60 सुसज्जित पानी स्लाइडहरू,2नदी,2लहर पूल, मिनी-गोल्फ र4ग्रह मा केवल एक - खेल को मैदानों र पनि पानी 4D सिनेमा।
5 Aquaventure, दुबई, संयुक्त अरब एमिरेट्स
संसारको सबै भन्दा राम्रो पानी पार्क कुरा, यो यूएई, अर्थात् दुबई बेवास्ता गर्न असम्भव छ। Aquaventure पाम Jumeirah, प्रसिद्ध कृत्रिम द्वीप मा स्थित छ। यो यूएई Waterpark मा सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा frequented छ। क्षेत्र मनोरञ्जन जटिल, 42 एकड छ त्यहाँ धेरै स्लाइडहरू, लहर पूल हो र त्यहाँ ओरालो छन्। वास्तविक नदी प्रवाह को क्षेत्र मा, "स्प्लास" सुसज्जित छ बच्चाहरु को लागि, सबैले dolphinarium भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ र पूल यी प्यारा स्तनधारी संग पौडी खेल्न पनि। थप menacing समुद्र प्राणीहरू शार्क जस्तै, जलजीवालय पराउँछु।
6 ट्रपिकल द्वीप Resort, बर्लिन, जर्मनी
यो पानी पार्क संसारमा तीन सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक छ। यसको क्षेत्र 8 फुटबल क्षेत्रहरू बराबर छ किनकी यो, 6000 मान्छे को लागि डिजाइन गरिएको छ। इलाका धेरै विषयगत भागमा विभाजित छ, उसलाई के गर्न लागि प्रत्येक holidaymaker रोचक फेला परेन। त्यहाँ सबै उमेरका लागि सवारी, साथै स्की र थकित पौडी खेल्न, तपाईं एक पैदल लिन र उज्ज्वल हरियो वनस्पति र रसीला रंग आनन्द उठाउन सक्छौं।
7 बंदरगाह Aventura, बार्सिलोना, स्पेन
"संसारको सबै भन्दा राम्रो पानी पार्क" (प्रत्येक मल पहिलो स्थानमा हुन योग्य देखि दर्जा, मनपरी मान्न सकिन्छ) को सूचीमा सातौं पङ्क्ति बंदरगाह Aventura ओगटेको छ।5लाख मान्छे एक वर्ष - पर्यटकहरू संख्या पनि प्रभावशाली छ। पानी पार्क प्रत्येक जो विभिन्न सवारी को एक अधिकता छ क्षेत्र, विभाजन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, एउटा स्लाइड 8 मृत लूपहरूको। यस वंश समयमा बाट यो 110 मी / घन्टा गति पुग्न सक्दैन। अलग बच्चाहरु को लागि रोचक आकर्षण सुसज्जित। पैदल वा डुङ्गाबाट: पानी पार्क प्रशासन यातायातका विधि चयन गर्न प्रदान गर्दछ।
8 "स्वर्ण खाडी", Gelendzhik, रूस
मूलतः, संसारको सबै भन्दा राम्रो पानी पार्क को सबै विदेश स्थित छन्। तर रूस, पनि, गर्व हुन केहि छ। ले, उदाहरणका लागि, Gelendzhik मा "स्वर्ण खाडी"। पहिले, यो देश मा सबै भन्दा ठूलो पानी पार्क छ। दोश्रो, यसको क्षेत्रमा त्यहाँ युरोप मा शीर्ष पाँच मा समावेश छन् भनेर आकर्षण हो। बच्चाहरु, किशोर र वयस्कहरूको लागि धेरै स्लाइडहरू छ जो एक पर्याप्त ठूलो पानी पार्क, - "सुनको खाडी"। घरबार र रुचाउने क्षेत्रमा लागि ठाउँ।
9 Sunway Lagoon, क्वालालम्पुर, मलेशिया
कृत्रिम समुद्र तट, bungalows, विषयगत क्षेत्रहरु, खजुरका र अन्य ट्रपिकल बिरुवाहरु - यो सबै मलेशियन पानी पार्क Sunway Lagoon पाउन सकिन्छ। साईट Surfers लागि स्वर्ग - 13,000 m² को एक क्षेत्र मा Nestled छ, यो उपत्यका एक लहर सिर्जना गर्ने, जटिलता र एक शक्तिशाली पम्प एक स्विमिंग पूल बदलिने को मजा पानी स्लाइडहरू धेरै लागि प्रसिद्ध छ।
10 Fasouri Watermania, Limassol, साइप्रस
Limassol मा Fasouri Watermania - विश्व »को" सर्वश्रेष्ठ पानी पार्क हाम्रो सानो सूचीमा अन्तिम। यसको क्षेत्र सबै स्वाद को लागि 30 स्लाइडहरू बाहेक, त्यहाँ ट्रपिकल जनावर र एक नौका मा सवारी मौका एक चिडियाघर छ, 100 000 m² छ, र। सिद्ध पानी पार्क, दुवै ठूलो र सानो अपील गर्नेछ जो अवकाश।
एक पानी पार्क - सम्पूर्ण परिवारको लागि सबै भन्दा राम्रो मनोरञ्जन ठाउँ मध्ये एक। त्यहाँ दुविधा छ भने, उदाहरणका लागि, अन जाने कोटे Azur फ्रान्स वा चीन मा, हामी त्यहाँ समुद्र छ, र पहिलो संस्करणमा दोस्रो भन्ने तथ्यलाई द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ - छैन। के देश मा पर्यटकहरु एक "सानो समुद्र" तिनीहरूले कहीं पाउनुहुनेछ पठाउन हुनेछ!
खार्किव चिडियाघर: तस्बिर, वर्णन, ठेगाना, शीर्षकमाथिको घण्टा
नियम र सिफारिसहरू: हावा मा जनावर को परिवहन
कसरी छैन जंगल हराएको गर्न? तपाईँले हराएको भने के गर्न
Tver क्षेत्रमा नदी Shosha: विवरण, फोटो, छुट्टी विचार
Pep: यो र त्यहाँ किन के हो?
व्यापार जोखिम बीमा: सुविधाहरू, प्रकार र सिफारिसहरू
Pancreatitis: लक्षण, प्रकार र रोग को कारण
शब्द "लामो": पर्यायवाची, विलोम, र शब्द विश्लेषण। को "लामो" शब्द कसरी हिज्जे गर्न?
प्रसूति राजधानी, FIU: भुक्तानी
सेवा विशेषताहरु: यो महत्त्वपूर्ण सम्झना छ
संक्षिप्त जीवनी Iriny Rodninoy
एक आलुबखडा कसरी रोपेर गर्न? बेर samoplodnye: ग्रेड
रूसीहरूले को दरबार - सोभियत संघ देखि अधूरा परियोजना